Lisitra Kildare - IntoKildare
Ny tsara indrindra amin'ny KildareFianakaviana ankohonanyMandeha an-tongotra sy mandeha an-tongotraGolfZavatra maimaim-poana hataoAndro oranaVatosoa miafinaAtsinanana Fahiny any IrlandylalanaCommunity
Ivotoerana momba ny zava-kanto any Riverbank
Adventure sy hetsika
Lalao Redhills Adventure aterineto
Lova sy tantara
Làlan'i St Brigid
Asa an-kalamanjana tsara indrindra any Kildare
Dia an-tongotra fito any Kildare
Fiantsenana any Kildare
Mandeha mamakivaky ny tanin'i Irlandy Equestrian
Stud nasionaly irlandey & zaridaina japoney
Jereo ny zavatra rehetra tokony hatao
Gastro-PubsFine DiningNy fisakafoanana ivelanyLive MusicDite amin'ny hariva
VOTE: Ny Pint of Guinness tsara indrindra an'i Kildare
Ny lisitra siny fisotro sy fisotroana Co Kildare faratampony
Ny toerana fisakafoanana ivelany tsara indrindra any Kildare
Toeram-pisakafoanana kely atoandro Kildare
Manontania olona eo an-toerana: Aiza ny fivarotana kafe tsara indrindra any Kildare
Jereo ny Sakafo sy zava-pisotro rehetra
Castles & Trano manan-tantaraLuxuryBudgetMpinamanaHotely misy dobo filomanosanaSpa HotelSariaka amin'ny bibyToerana fampakaram-bady
Carton House, trano fandraisam-bahiny tantanin'i Fairmont
Toeram-pisakafoanana hikarakarana tena tsara indrindra any Kildare
Caravan & Toeram-piompiana ala
Jereo ny Fonenana rehetra
Seasons any Kildare
Tonga any Kildare
Ho any Kildare
Manoloana ny fameperana Covid-19, hetsika sy hetsika maro ao Kildare dia mety nahemotra na nofoanana ary orinasa sy toerana marobe no mety hakatona vonjimaika. Manoro hevitra anao izahay mba hijery amin'ny orinasa sy / na ny toerana mifandraika amin'izany raha misy fanavaozana farany.
Ampio amin'ny tianao
Kafe tsy manam-potoana
Ao amin'ny tanànan'i Kilcock tsara tarehy no misy ny Timeless Café. Na sakafo maraina, atoandro, na brunch mihitsy aza, Timeless Café no toerana handehanana miaraka amin'ny sakafo mahafinaritra feno […]
Junior Einsteins Kildare dia mpanome Loka Mandresy Hands-On amin'ny traikefa STEM mampientam-po, mahasarika, andrana, azo ampiharina, interactive, atolotra amin'ny fomba matihanina amin'ny tontolo voarindra, azo antoka, manara-maso, fanabeazana ary mahafinaritra ny serivisy ataon'izy ireo; […]
Notarihan'ny Artista Fiona Barrett eo an-toerana, Ballymore Eustace Art Studio dia hita eo ivelan'ny tanàna mahafinaritra an'i Ballymore Eustace ao amin'ny County Kildare. Voahodidina saha, bibidia ary akoho […]
Ao amin'ny Airtastic Celbridge, misy fahafinaretana ho an'ny sokajin-taona rehetra! Ny hetsika ataon'izy ireo dia misy làlambe 8 XNUMX pin Bowling Alley, kianjan'ny Space Themed Mini Golf vaovao, Soft Play […]
Sekolin'i Cookie Kalbarri
Kalbarri dia sekoly fandrahoan-tsakafo tantanan'ny fianakaviana sy orinasa fandraharahana miasa avy ao Kilcullen any Co. Kildare. Miaraka amin'ny fanantitranterana ny fandrahoan-tsakafo mahasoa an'ny fianakaviana avy amin'ny akora farany tsara indrindra, Siobhan Murphy sy izy […]
Campus Maynooth & Fonenana fihaonambe
Trano fonenana tsara amin'ny toerana manan-tantara ao amin'ny tanànan'ny oniversite Maynooth. Mety tsara amin'ny fijerena ny Royal Canal Greenway.
Cookies of Caragh
Cookes of Caragh dia orinasam-pianakaviana mipetraka tsara ao Gastro pub, izay nandray anjara tamin'ny sehatry ny fandraisam-bahiny nandritra ny 50 taona lasa.
Manakaiky ny Kintana Kilkea, Mullaghreelan Wood dia fananana ala tsara tarehy izay manome ny mpitsidika traikefa ala miavaka.
Zahao ny zaridaina japoney malaza eran-tany ao amin'ny National National Stud.
Ny bisikiletako na ny fitsangatsanganako
Ny My Bike na ny Hike dia manome fitsangatsanganana an-tsambo izay tsy voatanisa, atolotra amin'ny fomba maharitra, miaraka amina manam-pahaizana marina eo an-toerana.
Kildare Library Services
Kildare Library Services dia manana tranomboky amin'ny tanàn-dehibe rehetra any Kildare ary manohana tranomboky 8 ampaham-potoana manerana ny faritany.
Ny Auld Shebeen
Ny Auld Shebeen Gastro Bar & Canalside B & B dia mijanona eo amoron'ny lakandrano ao Athy Co. Kildare. Nanokatra ny varavarany tamin'ny Jolay 2020 taorian'ny […]
Pubs & NightlifeBed & Breakfast
Katedraly St Brigid & Tilikambon'ny Boriborintany
Miorina amin'ny tranokala nananganana monastera an'i St Brigid ny mpiaro an'i Kildare tamin'ny 480AD. Ny mpitsidika dia afaka mijery ny katedraly 750 taona ary miakatra ny Tilikambo Round avo indrindra any Irlandy amin'ny alàlan'ny fidiran'ny besinimaro.
Trano fisakafoanana iray an'ny fianakaviana ao afovoan'ny tanànan'i Kildare.
Làlana manan-tantara Naas
Manaova tsangam-bato manodidina ny Làlana manan-tantara an'i Naas ary sokafy ny harena miafina izay mety tsy fantatrao tao amin'ny tanànan'i Naas Co. Kildare
Racing Academy Irlanda
Ny Akademiam-panofanana nasionaly ho an'ny indostrian'ny mpitaingin-tsoavaly Irlandey izay manolotra fampianarana ho an'ny jockey, mpiasa marin-toerana, mpanazatra mpihazakazaka, mpiompy ary olon-kafa tafiditra amin'ny sehatry ny fanodinana.
Hazakazaka soavaly Irlandy
Horse Racing Ireland (HRI) no fahefana nasionaly amin'ny hazakaza-kitra feno hazakazaka any Irlanda, manana andraikitra amin'ny fitantanana, fampandrosoana ary fampiroboroboana ny indostria.
Mongey Communication dia orinasam-pianakaviana miorina ao Kildare izay nitombo ary nanjary asa vaovaon'ny teknolojia fifandraisana.
Nolans Butchers dia naorina tamin'ny taona 1886 ary naorina teo amin'ny arabe malalaky ny tanàna kely iray any Co.Kildare fantatra amin'ny anarana hoe Kilcullen avy amin'ireo mpirahalahy Nolan.
GlennGorey Pumps no "fivarotana iray tokan-trano" ho an'ny paompin-drano rehetra sy ny filàna fametrahana
Ny orinasan-divay miboridana
Ny Nude Wine Co. dia divay araka ny natiora natiora. Liana amin'ny divay izy ireo ary mino fa manakaiky ny natiora dia tsara kokoa ho an'ny rehetra izany.
Beanery dia vanin-kafe kafe mahazatra, antitrika ary frantsay izay hanampy fahafinaretana sy fomba amin'ny hetsika rehetra!
Newbridge Tidy Towns dia vondrom-piarahamonina izay miasa mafy mba hahatonga ny tanàna ho toerana manintona kokoa hipetrahana, hiasa ary hanao orinasa.
Monasterevin Tidy Towns
Monasterevin Tidy Towns dia mpihinana vondrom-piarahamonina eo an-toerana ao amin'ny tanàna kely iray any Kildare izay mampiseho fitiavana tsy manam-paharoa amin'ny faritaniny.
Moyvalley Golf course
Namboarin'i Darren Clarke, Moyvalley Golf Club dia trano misy taranja 72 mety ho an'ny mpilalao golf rehetra.
Kilkea Castle dia tsy trano iray amin'ireo tranobe tranainy indrindra any Irlandy ihany fa misy ihany koa ny lalao golf any amin'ny hazakazaka.
Carton House Carton
Any Maynooth, Carton House Golf dia manolotra taranja golf tompon-daka roa, ny Montgomerie Links Golf Course ary ny O'Meara Parkland Golf Cour.
The Palmer Golf Courses - The K Club
Ny 5 Star K Club Hotel & Golf Resort dia iray amin'ireo hotely golf tsara indrindra any Irlandy miaraka amin'ny iray amin'ireo golf tsara indrindra any Irlandy, noforonin'ny iray amin'ireo mpilalao sangany amin'ny tantaran'ny fanatanjahantena, Arnold Palmer.
Làlana momba ny vakoky ny tanànan'i Kildare
Tsidiho ny iray amin'ireo tanàna tranainy indrindra any Irlandy izay ahitana ny Monastic St. Brigid, Castle Norman, Abbeys medieval telo, Turf Club voalohany any Irlandy sy maro hafa.
Ny Guinness Storehouse dia mety ho tranon'ny tampon-daza malaza saingy mandalina lalindalina kokoa ary ho hitanao fa eo amin'ny County Kildare no misy ny toerana nahaterahany.
Ny St Brigid's Trail dia manaraka ny dian'ny iray amin'ireo olo-masina malalantsika indrindra namakivaky ny tanànan'i Kildare ary mizaha io zotra angano io mba hahitana ny lova navelan'i St Brigid.
Ny Grand Canal Way dia manaraka ny tanety ahitra mahafinaritra sy ny arabe amoron-drano amoron-drano hatrany amin'ny seranan-tsambon'i Shannon.
Làlana an-tongotra 167km manaraka ny dian'ireo mpanofa 1,490 voatery nifindra monina avy tany Strokestown, namakivaky ny County Kildare tao Kilcock, Maynooth ary Leixlip.
Valan-javaboary ala Donadea
Donadea dia manolotra diabe maromaro ho an'ny ambaratonga traikefa rehetra, avy amin'ny dia an-tongotra 30 minitra fohy manodidina ny farihy mankany amin'ny làlana 6km izay mitondra anao manodidina ny valan-javaboary!
Vetivety fotsiny eo ivelan'ny Village Rathangan dia misy ny tsiambaratelo nafenina tsara indrindra ho an'ny natiora!
Làlan'ny Lova Celbridge
Jereo i Celbridge sy Castletown House, trano misy tantara mahaliana sy tranobe manan-tantara mifandray amin'ny andiana olo-manan-tantara tamin'ny lasa.
Angamba ny faritra tranainy indrindra sy lehibe indrindra amin'ny ahitra semi-voajanahary any Eropa sy ny toerana misy ny sarimihetsika 'Braveheart', dia toeram-pandehanana malaza ho an'ny mponina sy ny mpitsidika.
Castle an'i Maynooth
Nijoro teo am-baravaran'ny Oniversiten'i Maynooth, ny rava tamin'ny taonjato faha-12, dia trano mimanda ary fonenana voalohany an'ny Earl of Kildare.
Lalan'ny Explorer - Làlan'ny Lova Shackleton
Spanning South County Kildare, tadiavo ireo tranonkala marobe mifandraika amin'ilay mpikaroka polar, Ernest Shackleton.
Iray amin'ireo manintona mpizahatany voajanahary ao amin'ny Co. Kildare mankalaza ny fahagagana sy ny hakanton'ireo tany maitso Irlandy sy ny bibidia.
Jereo ny monasiteran'ny County Kildare manodidina ny rava atmosfera, ny sasany amin'ireo tilikambo boribory voatahiry tsara indrindra any Irlandy, lakroa avo ary tantara malaza sy tantaram-bahoaka.
Mandehana ny dian'ny 'Derby' maherin'ny 12 kilometatra, manaraka ny angon-tsarin'ny angano momba ny hazakaza-tsoavaly malaza any Irlandy, The Irish Derby.
Ala afangaro mifangaro amin'ny safidin'ny làlana mandeha amin'ny toerana misy ny monasiteran'ny taonjato faha-5 natsangan'i St Evin ary latsaky ny 1km miala an'i Monasterevin.
Ny Greenway lava indrindra any Irlandy hatrany amin'ny 130km mamakivaky ny Tendrontany Atsinanana sy Irlandey miafina any Irlandy. Làlana iray, zavatra tsy hita farany.
Ankafizo ny fitsangantsanganana antoandro, fitsangatsanganana iray andro na fialantsasatra herinandro fitsaharana mihitsy aza hijerena ny renirano mahafinaritra indrindra any Irlandy, miaraka amina zavatra mahaliana isaky ny miala amin'ity towpath 200 taona ity.
Pollardstown Fen dia manolotra dia tsy manam-paharoa amin'ny tany tsy manam-paharoa! Araho ny boardwalk mamakivaky ny fen hahafahanao mikatona ity tany haavo tanety 220 hekitara ity.
Làlana Gordon Bennett
Ilaina ho an'ireo mpankafy fiara mahazatra sy mpamily fiara isan'andro, ny Gordon Bennett Route dia hitondra anao amin'ny dia manan-tantara mamakivaky ireo tanàna sy vohitra kanto ao Kildare.
Ity trano fandraisam-bahiny misy kintana 4 ity dia toerana mampiantrano sy manara-penitra ary mahaliana amin'ny fialan-tsasatra, tantaram-pitiavana ary fialan-tsasatra amin'ny loka Choice Choice 2020.
1 2 3 Manaraka
Omano ny dianao
Zavatra tokony hatao
Araho izahay mba hahazo aingam-panahy sy torohevitra avy amin'i Kildare
IntoKildare © 2021 - Site an'i tanteraka | politika fiarovana fiainan'olona
Miahy ao Kildare izahay
Midira amin'ny ekipa
Raiso ny vaovao farany rehetra, torohevitra, fanentanana ary maro hafa
* Amin'ny fisoratana anarana dia manaiky ny anay ianao politika fiarovana fiainan'olona ary handraisana ny mailaka anay
Mampiasa cookies ity tranonkala ity mba hanatsarana ny traikefanao. Isika dia mihevitra fa mahavita azy ianao, saingy afaka misafidy raha tianao.Ekeo mandà politika fiarovana fiainan'olona